Daawo Sawirro:Dowladaha Somalia & Turkiga oo heshiis cusub ku kala saxiixday Istanbul | Arrimaha Bulshada
Home News Daawo Sawirro:Dowladaha Somalia & Turkiga oo heshiis cusub ku kala saxiixday Istanbul
Daawo Sawirro:Dowladaha Somalia & Turkiga oo heshiis cusub ku kala saxiixday Istanbul
Friday, October 06, 2017 News Edit
Bulsha:- Wasiiradaha Beeraha Somalia iyo Turkiga ayaa ku kala saxiixday magaalada Istanbul heshiis ku saabsan wax soo saarka Somalia sidii sare loogu qaadi lahaa isla markaana qudaaarta laga soo saaro dalkeena loo kobcin lahaa.
Labada dowladood ayaa waxaa heshiiska u kala saxiixay Saciid Xuseen Ciid Wasiirka Wasaarada Beeraha Somalia, halka dowladda Turkiga uu u saxiixay Dr Ahmet Eşref oo Wasiirka Beeraha Turkiga.
Heshiiskan ayaa irdaha u faraya iskaashi buuxa oo labada dal ay ka yeeshaan dhinaca beeraha, iyadoo taageero dhinac walbo leh ay dowlada Turkiga ku bixineyso Beeraha Soomaaliya sida dhanka teknooljiyada ee beeraha dib u dhiska kaabayaasha Abuurka iyo waaxda badbaadada beeraha.
Qodobada muhiimka ah ee ku jira heshiiska ayaa waxaa ka mid ah in ganacsiga wax soo saarka beeraha ay iska kaashadaan labada dal.
Wafdiga Wasiirka Beeraha oo maalmahan ku sugan wadankaasi Turkiga ayaa waxaa qeyb ka ah masuulayiin ka tirsan Wasaarada Beeraha iyo Safaiirka Dalka Turkiga u fadhiya Soomaaliya.